192.168.8.2 - Admin Pinda - Username uye nePassword
192.168.8.2 Ndiyo imwe IP yakachengetedzwa kuti ishandise iyo admin pani yemaraira. Iyi & yakawanda IPs yakafanana ne 192.168.77.1, 192.168.123.1, 192.168.8.1, nezvimwe. Mumabhuku, inotodaidzwa kuti "Default Gateway IP".
The http://192.168.8.2 IP kero yakanyorwa neIANA Internet Yakapihwa manhamba Chiremera sechikamu che 192.168.8.0 / 24 kure network. Munzvimbo yakavanzika, IP kero haina kupihwa kune chero imwe kambani uye chero munhu anofanirwa kushandisa iyo IP kero pasina kubvumirana kweInternet Regional registry sekutsanangurwa muRFC 1918, zvakasiyana nekero IP yeruzhinji.
Svika kune Admin Peji
Ingo nyora 192.168.8.2 mune kero bar yewebhu browser.
Patafura, unogona kushandisa iyo admin peji & iwe zvakare unove shuwa kuti upinde muPW. Nekudzvanya iyi link 192.168.8.2 iwe unogona kunyange kuwana log-on kwazviri.
Zvakare, iwe unowana ese ekutarisa mhedzisiro kune yakavanzika 192.168.8.2 IP kero.
Kana iwe uchitsvaga kutsvaga iko kupinda kweiyo isina waya, router, yekuwana poindi, kana modem iwe unogona kuishandisa nekungobaya pane iyi link yeHTTPS kana HTTP.
Zvimwe pane 192.168.8.2
192.168.8.2 IP kero yakanyorwa pamwe ne Internet Yakagoverwa Nhamba Chiremera IANA sebazi rakachengetedzwa netiweki 192.168.8.0. Munzvimbo yakavharika, kero yeIP haina kupihwa sangano rimwe chete, pamwe neIPP, uye munhu wese anogona kushandisa akadai IP kero pasina kubvumirana kwerejista yedunhu Internet.
Zvakare zvakare, IP mapaketi anotorwa kubva kune yako yega renji haigone kutumirwa kuburikidza neyakagovaniswa Internet, & saka kana yakadaro yega network ichida kubatanidza kuInternet, inoda kuzadzikiswa kuburikidza ne networking kero inoshandura (kunyange inonzi seNAT) proxy kana gedhi server. Mufananidzo weNAT gedhi inogona kunge iri waya isina waya kana wired yaunowana kubva kumutengesi webandband.
Zvekuedza izvi iwe unofanirwa kupinda mune kero bar 192.168.8.2 yewaunofarira webhurawuza rakafanana neMozilla Firefox kana Google Chrome & pinda nemazita evashandisi pamwe neepassword inopihwa nemupi wako.
Unogona kushandisa mhando dzakadai dzeIP kero dzakavanzika maratidziro munzvimbo dzako dzemunharaunda pamwe nekuigovera kuchinhu chakadai sepiritsi, PC, malaptop, & Smartphones. Anogashira ndiye muridzi wechigadzirwa 192.168.8.2 IP kero.
Username & password ye 192.168.8.2